Q.M oo war kasoo saartay Dagaalada ka socda Somaliya. – idalenews.com
Q.M oo war kasoo saartay Dagaalada ka socda Somaliya.
Wakaalada QM ee arimaha bini aadamnimo u qaabilsan ayaa sheegtay in ay adag tahay in waqtigaan Somalia dib loogu so celiyo qaxootiga Soomaalida ee ku sugan dalka Kenya iyadoona arimahaasi u sababeeysay in Somalia aysan weli xasilooneen.
Xafiiska QM ee arimaha bini aadanimada OCHA ayaa sheegay war bixin cusub uu soo saaray in howlgalada ka bilowday Koonfurta iyo bartamaha dalka ay gaab soo galiyeen howlihii ku aadana in qaxootiga dib loogu soo celiyo Somalia.
OCHA waxa ay sheegtay in dagaalkii bishii March laga bilaabay gobolo la qorsheenayay in lagu soo celiyo qaxootiga ay hada adag tahay in lagu soo dhiirado.
Hadalkaan kasoo yeeray OCHA ayaa imaanaya kadib markii dowlada Kenya ay amar ku bixisay in qaxootiga Soomaalida dalkaasi ku sugan ay xerooyinkodi dib ugu laabtaan.
QM waqti hore waxa ay sheegtay in la qorsheeyay in 50,000-qof oo qaxooti Soomaali ah dib loogu soo celiyo Somalia.
Wakaalada gargaarka bini aadanimo bixiya ayaa sheegay in faqriga,shaqala’aanida iyo cuni yarida iyo biyo la aanta ay ku sii baaheyso qaar kamid ah gobolada dalka.
OCAHA waxa ay sheegen in tusaale ahaan magaalada Baydhabo ay kamid aheyd goobaha la doonayay in lagu soo celiyo qaxootiga.
Goobaha kale ee la qorsheeyay in qaxotiga lagu soo celiyo waxaa kamid ah Kismaayo gobolka Jubada Hoose iyo degmada Luuq ee gobolka Gedo.
OCHA waxa ay diyaarisay 2663-qof oo qaxootiga Soomaalida ku sugan dalkaasi Kenya,Kismaayo waxaa loo diyaariyay qaxooti gaaraya 792 Baydhabo waxa loo diyaariyay 401 qof halka luuqna loo diyaariyay 128-qof.
Md Xasan Sheekh oo la kulmay jaaliyadda Soomaalida ee Nairobi.
Fanaaniinta Cadey Cali iyo Laki Haji oo ka tumay Xaflad lagu taageeraayo K/Galbeed oo ka dhacday Nederland + sawiro.